တရားထိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ အ‌ညောင်းထိုင်တာ ဖြစ်နေပြီလား? – တရားဓမ္မဆွေးနွေးခန်း – Civilised Forums of Myanmar Community
Topic starter 22/08/2021 12:44 pm
ကိုဗစ်ကာလ အချိန်ပိုရှိလာတာကြောင့် မနက်ဖက် အဓိဌာန်ချိန်လုပ်ပြီး တရားအားထုတ်တယ်။
တရားအားထုတ်တဲ့ အခါ ဦးဂိုအင်ဂါရဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ပေးခဲ့တဲ့ စုပေါင်းတရားပေး (Group sitting meditation instruction) အသံသွင်းထားတဲ့ တရားတွေကို တနေ့ တနိုင်ငံကတရား ပြောင်းဖွင့်ပြီး အားထုတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တရက်ကြတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိကျောင်းမှာ ပေးခဲ့တဲ့ တရား အသံဖမ်းထားတာကို ဖွင့်ဖြစ်လိုက်တယ်။
တကယ်တော့ ဦးဂိုအင်ဂါ တရားပေးတွေမှာ အင်္ဂလိပ်အသံနဲ့ဘဲ ရွေးပြီးဖွင့်ပေမဲ့၊ မြန်မာပြည်မှာ ပေးတဲ့ တရားမှာ မြန်မာဘာသာပြန်ထားတာကို ကိုယ်တိုင်က မြန်မာမို့လို့ ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။
အသံသွင်း တရားမှာ - ပထမ ဦးဂိုအင်ဂါက အင်္ဂလိပ်လို တရားပေးတယ်၊ တပိုင်းခြင်း နောက်မှာ ဘာသာပြန်တဲ့ တယောက်က မြန်မာလို ပြန်ပြောပြတယ်။ အဲဒီမှာ - အင်္ဂလိပ်လို ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တမျိုး၊ ဘာသာပြန် ပြောပြတာက တခြား အလွဲလွဲကို ဖြစ်နေတော့တာကို ကြားရတော့တာပါဘဲ။ သတိထားမိလိုက်တာက - မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှုနဲ့ သိလာတဲ့ ဗဟုသုတ အမှားအယွင်းတွေ အရိုးစွဲနေတော့ ဘာသာပြန်တာတောင် တည့်တည့်မတ်မတ် မှန်မှန်ကန်ကန် ဘာသာ မပြန်တတ်တော့ဘဲ ကြိုးနေတဲ့ ခေါက်ရိုးအတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ အသိမှား အမှတ်မှားတွေနဲ့ ညှိပြီး ပြန်ဆိုပြနေတာပါဘဲ။
ဦးဂိုအင်ဂါဟာ ကမ္ဘာမှာ ဝိပဿနာ တရားပြတဲ့အခါ နာမည်ကြီးပြီး ဘာသာခြားတွေကိုယ်တိုင် လက်ခံကျင့်ကြံ အားထုတ်လာကြတဲ့ အကြောင်း အဓိက တခုဟာ - ကြားဖူး သိဖူး မြင်ဖူးတဲ့ ဗဟုသုတကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ရှေးရိုးစဥ်လာကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်ရလို့ဖြစ်စေ လက်မခံဘဲ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ လက်တွေ့ ခံစားသိပြီးမှ လက်ခံဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာပြန်တဲ့ လူမှာတော့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ လက်တွေ့ ခံစားသိတာမဟုတ်ဘဲ ကြားဖူး သိဖူးတဲ့ ဗဟုသုတ အသိအစွဲတွေနဲ့ ဘာသာပြန်တဲ့ အခါ - ဦးဂိုအင်ဂါက "... ... ယောဂီတို့ အနိစ္စကို တွေ့လာကြလိမ့်မယ်" လို့ အင်္ဂလိပ်လို ဆိုတာကိုပင်၊ "... ... ယောဂီတို့ အနိစ္စလို့ မြင်ကြည့်ကြပါ" လို့ ပြန်လိုက်ပါတော့တယ်။ မြင်တာကို မြင်တဲ့ အတိုင်း အရှိကိုကို အရှိအတိုင်း ကြည့်ရမှာကို၊ မြင်စေချင်သလို ဖြစ်စေချင်သလို သိဖူး ကြားဖူးသလို လိုက်ကြည့်ပြီး ဆန့်ကျင်ဖက်အဓိပ္ပါယ် ကို တလွဲတချော် ပြန်လိုက်တာပါဘဲ။
တခါက မြန်မာပြည်က အာဂုံ‌ဆောင် ကိုယ်တော်တပါးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ - "ဒကာကြီး တရားအားထုတ်နေတယ် ဆိုရင် အမျိုးသမီးများကို အပုတ်ကောင်ကြီး ရုပ်ဆောင်နေတာ မြင်အောင်ကြည့်ပေါ့" လို့ ဆိုတုန်းက၊ "အရှင်ဘုရား အဲဒီ ရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပုတ်ကောင်ကြီးက မပုတ်ခင် လှ နေတော့ ခက်တာပေါ့" လို့ ပြန်ပြောခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ရေထဲမဆင်းဖူးဘဲ ရေကူးနည်းစာအုပ် အာဂုံဆောင်ပြီး အခြားသူတွေကို ဘယ်လို ရေကူးသင်လို့ ရပါ့မလဲ?
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စကားကို မြန်မာလို မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ ဘာသာမပြန်ဘဲ ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်သိမှတ်သလို လိုက်စွဲတွေးပြီး ဘာသာပြန်တရားပေးတဲ့ အခါ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ကျွမ်းကျင်မှု မရှိတဲ့ ယောဂီတွေမှာ အမှတ်မှား အမြင်မှားပြီး၊ တရားထိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ အ‌ညောင်းထိုင်တာ ဖြစ်ပြီး၊ တရားအားထုတ်ရာ မဖြစ်ဘဲ အပူထုတ်ရာသာဖြစ်တော့မှာကို စိတ်ပျက်မိပါတော့တယ်။